Fadhigii baarlamaanka Somaliland ee maanta oo faraha la isula tagey, iyo afhayeenka oo bistoolad loola soo baxay. – Radio Daljir
Fadhigii baarlamaanka Somaliland ee maanta oo faraha la isula tagey, iyo afhayeenka oo bistoolad loola soo baxay.
Hargeysa, Spet 08 – Fadhigii golaha wakiilada Somaliland ayaa mar kale la xiray.
Mid ka mid ah mudanayaasha ayaa la sheegay in uu bistoolad ula soo baxay afhayeenka baarlamaanka, walow aan wax xabado ah la ridin.
Bilayska oo xoog ku soo galay baarlamaanka ayaa amar ku siiyey mudanayaashu in ay faaruqiyaan golaha, fadhi kalena aanu dhici karin illaa amar dambe.
Dhawr maalmood ka hor ayaa buuq kan oo kale ahi uu ka dhex qarxay fadhigii mudanayaasha, taas oo sababtay in fadhiga dib loo dhigo.
Buuqa iyo qaska ayaa ka dhashay 2 mooshin oo is-barbar socoda oo la hor keenay mudanayasaha baarlamaanka, dhaliyeyna in ciidanka bilaysku ay xoog ku soo galaan aqalka baarlamaanka, ayna xiraan kulankii golaha.
2-da mooshin ee muranka dhaliyey, horna yaal golaha ayaa kala ah:
a) In xilka laga qaado Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa,
b) In afahayeenka baarlamaaka xilka laga qaado.
Qaar ka mid ah miudanayaasha oo aan wax ka weydiinay 2-da mooshin ayaa sheegay in mooshinka hore ay keeneen mudanayaal u badan axsaabta mucaaradka ah, khaasatan Kulmiye, halka mooshinka kalena ay keeneen mudanayaan u badan xisbiga UDUB ee talada haya.
Muranka siyaasadeed ee Somaliland ayaa salka ku haya diiwaangelin laga sameeyey gobollada Somaliland qaarkood, ayna ahayd in doorashooyinka lagu saleeyo, oo la sheegay in aan lagu kalsoonayn, aanan la adeegsan karin.
Axsaabta mucaaradka ah ayaa iyagu qaba fikir kaa ka duwan oo dhigayan in diiwaangelinta la adeegsado, laguna saleeyo doorashooyinka.
Xukuumada M/weyne Riyaale ee xisbiga UDUB ayaa iyagu diidan taa, soona jeediyey in doorashooyinka la qabto, balse aan la isticmaalin cadadka tirada dadka ee is-diiwaangeliyey.
Hay’ada Interpeace ee iyadu farsamo ahaan hindistay iyo gacantana ku haysay diiwaangelinta ayaa Somaliland laga eryey, kadib markii ay qaateen fikir la mid ah ka mucaaradka, ayna sheegeen in natiijada diiwaangelintu ay sax tahay, laguna kalsoonaan karo, codayntana lagu saleeyo.
Doorashooyinka ayaa dhawr jeer oo hore dib loo dhigay. Ballantii ugu damabaysay ee isla saxiixeen 3-da xisbi ee ku tartamaya doorashada ayaa ahayd in doorashooyinka la qabto 27-ka bisha Sebtember, 2009. Taasi sida muuqata suurtgal ma aha, axsaabta mucaaradka ahina waxaa ay soo jeediyeen in hogaan ku-meel-gaar ah, oo isku-dhaf ah, hoggaanka dalka loo dhiibo, xil siyaadin dambena aan loo samayn xukuumada M/weyne Riyaale. Riyaale fikirkaa kuma qanacsana, waana uu ku gacansayray talooyin badan oo loo soo jeediyey oo badi ku taliyey in uu hoggaanka dhiibo.
Falka maanta ka dhacay baarlamaanka ayaa u muuqda in uu xaajada cirka ku sii shareeray, lagana cabsi qabaa in ay dalow aan laga soo qaban karin ay ka tuurto.